Waliigaltee nageenyaa Itoophiyaa fi Eertiraa - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 13:39 8 Fuulbaana 202113:39 8 Fuulbaana 2021
Reeffa laga Takkazeetti argaman ilaalchisuun Sudaan ambaasaaddara Itoophiyaa waamtee gaafatte
Reeffi 30'tti siqu baatii dura laga Takkazee keessatti argamuu isaa hordofee Sudaan ambaasaaddara Itoophiyaa Kaartumitti argamu waamtee gaafachuun ishee himame.
...tti maxxanfame 7:50 30 Hagayya 20217:50 30 Hagayya 2021
Humnoonni Tigraay Gamtaa Afrikaa loogiidhaan himatan
Humnoonni finciltoota naannoo Tigraay mootummaa Federaalaa walin wal waraanaa jiran Gamtaan Afrikaa (AU) ni looga jechuun komatan.
...tti maxxanfame 4:19 26 Hagayya 20214:19 26 Hagayya 2021
To'annaa humnoota TPLF jala kan jirtu Tigraay keessatti jireenyi maal fakkaata?
Naannoo Tigraay keessatti tajaajilawwan akka ibsaa, bilbila, intarneetii, baankiifi geejibni erga adda citee baatii lama ta'e keessatti jireenyi maala akka fakkaatu jiraattota gaafanneerra.
...tti maxxanfame 7:02 20 Hagayya 20217:02 20 Hagayya 2021
Wanti ganna 20 dura lammilee Eertiraarra gahe, dhalattoota Tigraayirra gahaa jiraa?
Sadaasa 2020 keessa waldhabdee Tigraay keessatti uumame booda, Itoophiyaa naannoolee adda addaa keessa kan jiraatan dhalattoonni Tigraay, eenyummaa keenya irratti hundaa’uun haleellaan nurra ga’aa jira jedhu.
...tti maxxanfame 11:06 16 Hagayya 202111:06 16 Hagayya 2021
Sudaan Itoophiyaatti nagaan akka bu'u yaalii gochuu akka itti fuftu beeksiste
Gama Lixaan biyya hollaa Itoophiyaa kan taate Sudaan carraaqqiin walitti bu'insa Itoophiyaa keessa jiruuf jaarsa ta'uun araarsuu fudhatamma dhabullee yaalii taasisaa jirtu ammallee akka itti fuftu beeksisteetti.
...tti maxxanfame 13:24 4 Hagayya 202113:24 4 Hagayya 2021
Qaamoleen Tigraayitti lolarra jiran dhaabanii mariin akka jalqabamu Imbaasiin US waamicha taasise
Finciltoonni Humna Bilisa Baasaa Ummata Tigraay (TPLF) naannoo Amaaraafi Affaar keessaa, humnoonni naannoo Amaaraa ammoo Lixa Tigraay keessaa ba'uu qabu jechuun Samaantaa Paawor akeekkachiisan.
...tti maxxanfame 4:28 20 Adooleessa 20214:28 20 Adooleessa 2021
Araarri Itoophiyaafi Ertiraa jidduutti bu'e ija lammiilee Ertiraatiin
Itoophiyaafi Ertiraan erga araara buusanii waggaa sadii ta'eera. Araarri kun maal fida jedhamee eegame? Wanta eegame Ertiraa keessa fideeraa? Lammiileen Ertiraa waan jedhan qabu.
...tti maxxanfame 4:09 30 Waxabajjii 20214:09 30 Waxabajjii 2021
Humnooti TPLF lafa to'annoo isaanii jala jiru babal'ifachaa jiru
Humnootiin Tigraay hanga 'lafti Tigraay taakkuun tokkollee osoo hin hafiin bilisoomutti waraana akka itti fufan himan.
...tti maxxanfame 13:19 29 Waxabajjii 202113:19 29 Waxabajjii 2021
Murtee waraanaa dhaabuu Tigraay fi gaaffilee deebii hin argatiin
Sababii waraana naannichatti gageeffamaa turen walqabatee aanga'oonniifi humnoonni Ittisa Tigraay kan Maqaleedhaa baqatanii turan, ji'oota saddetiin booda Waxabajji 28, 2021 deebi'anii Magaalaa guddiittii naannichaa to'atan.